Alatsinainy 08 Aprily 2019. – FJKM
Alatsinainy 08 Aprily 2019.
Fandalinana ny Boky Marka
Nandao ny efitr’i Galilia i Jesoa dia nankany amin’ny tanànan’i Kapernaomy indray.
1-Nirohotra nanatona an’i Jesoa ny olona
Efa nalaza tao Kapernaomy i Jesoa ka hitan’ny olona foana izay nalehany(1.28). Ny fampianarany feno fahefana sy ny fansitranany no nampalaza an’i Jeso ka nirohotan’ny olona nanatona Azy . Nataony lahimatoan’asa anefa na izany aza ny nitoriteny ho an’ireo vahoaka ireo(and2) .
Finoana no nilanjan’izy efa-dahy ilay marary nanatona an’i Jesoa . Finoana no naneken’ilay malemy nolanjalanjain’izy efa-dahy nisedra ny sarotra rehetra nanatona an’i Jesoa (and4). Ny finoana nananan’izy ireo no nanamarinan’i Jesoa ilay marary ka nitenenany taminy hoe: »Anaka , voavela ny helokao« (and5). Mahadio ny otanao rehetra i Jesoa fa manatona Azy amin’ny finoana .
2-Nantsoin’i Jesoa ho isan’ny mpianatra i Levy
Nankeny an-dranomasina indray i Jesoa ary dia nirohotra nanaraka Azy ny vahoaka. Teny no niantsoany ireo mpianany 4 voalohany (1.17,20) . Teo amperinasa koa i Levy no nantsoin’i Jesoa (and14).Tsy azoazon’ny Mpanora-dalàna sy ny Fariseo i Jesoa « niara-nipetraka tamin’ny mpanota » (and16) . ho an’ny mpanota mihitsy no nanirahana Azy . Niady ho an’ireo Izy (and18). Ho anao koa no nahatongavany .
« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra‘ Boky faha-6